Abafundi abaningi bafunda ngemali yokwebolekwa - Bayede News
Kuzwisa ubuhlungu ukubona aboHlanga bengene shiqe ezikweletini ezidalwe ukubolekwa kwemali ukuze kukhokhelwe imfundo ezikhungweni zemfundo ephakeme. Abanye babo bayiboleka bazi kahle ukuthi abasebenzi, okwenza kubenzima ukuyikhokha. Kubuhlungu kulabo abahleli emakhaya neziqu ezikhokhelwe ngemali ebolekiwe.
Okushayisa ngovalo ukubona inani labantu abasha abaqedile ukufundela amakhono athize behleli emakhaya bengasebenzi. Kubuhlungu kunjalo, kusemqoka ukuthi izikweletu esizenzile sizikhokhe, ikakhulukazi kulabo ababoleke ezikhungweni ezibolekisa ngemali ezifaka phakathi amabhange.
Ukukhokhela izikweletu zethu kusiza ngokuthi kugcine igama lethu lilihle, ngoba iningi lezikhungo ezibolekisa ngemali liyabophana uma ungasayikhokhi imali oyikweletayo. Kulezi zigatshana ezilandelayo ngivumele ngenabe ngezindlela ezahlukahlukene ezingenza ukwazi ukuthi ugweme ukuba sezikweletini kanye nendlela yokuzikhokhela uma usuzenzile.
Ngaphambi kokwenaba ngezindlela zokukhokhela izikweletu ezidalwe ukuboleka imali yokufunda, ngifisa ukunxusa abazali ukuthi bathole umuntu ongabeluleka kuqala ngemalimboleko. Izikweletu ziyayibulala imizi futhi zibuyiselana emuva.
Uyadinga ukuthi uthole umuntu ozokweluleka ngezikweletu kanye nokukhokhelwa kwazo ngaphambi kokuba uzenze. Njengomeluleki wantu abasha ngokwezemfundo, ngihlezi ngichaza kubazali engibabona beyongena eweni lezikweletu ngenxa yokuzama ukujabulisa umntwana.
Ngiye ngigqugquzele ukuthi akuhlalwe phansi kuboniswane ngoba iningi labazali lisezikweletini zemali eyakhokhela iziqu ezingaqedwanga. Abanye abantwana ngenxa yokwesaba ihlazo lokuhlala ekhaya ontanga babo besezikhungweni zemfundo ephakeme, baye bafakele abazali ingcindezi ukuthi babakhokhele nasezikhungweni ezibizayo.
Kanti esengikufundile ezinsukwini ukuthi abanye babazali bazifaka bona kwenkulu ingcidezi yokuqhudelana nabanye abazali. Lo mqhudelwano ubafaka enkingeni labo abangenamali ngoba bagcina bengene ezikweletini ezingenasidingo.
Indlela yokuqala engelula yokukhokhela noma yokugwema izikweletu, ukungalindeli uHulumeni ukuba akunike umfundaze. Iqiniso lithi akusibo bonke abafundi uHulumeni ozokwazi ukubakhokhela futhi noma ukhokha ukhokhele yonke into. Zikhona izinto ezidinga ukuthi umzali kanye nomfundi azisukumele aklame indima yakhe.
Ukulindela uHulumeni kwenza abazali abaningi bagoqe izandla kungabi khona into abayenzayo. Iqiniso lithi kukhona abazali abangakwazi ukukhokha lokho okuncane ekwehliseni isikweletu kodwa abafuni. Bathi uHulumeni ubathembisile imfundo yamahhala, futhi ngivumelana nabo ukuthi uHulumeni usethembisile ukuthi imfundo izotholakala mahhala.
Okubuhlungu ukuthi kubonakala ngathi kusazothatha isikhathi eside ngaphambi kokuthi imfundo itholakale mahhala futhi itholwe yibo bonke abafundi. Okusho ukuthi kumele uzame ukuthi ukhokhe. Abanye abazali banezinkomo ezigcwele izibaya kodwa abafuni ukuthengisa ngisho inkomo eyodwa ukuze kuphungulwe isikweletu. Into engiyifundile ngesikweletu ukuthi uma ungasikhokhele siyazala. Uma sesike saqala ukuzala kuye kube nzima ukuthi sikhokheleke ngendlela efanele.
Okwesibili okuyindlela yokukhokhela noma indlela yokwenza isikweletu singabi sikhulu kakhulu, ukuya esikhungweni uchaze udaba lwakho ukuze isikweletu singabi nenzalo eningi. Ukuvela esikhungweni akusho ukuthi ngeke usakhokha kodwa kwenza ukuthi uthole ithuba lokubeka udaba lwakho. Lokhu kungenza ukuthi isikweletu sakho singabi nenzalo.
Ngabe injalo isazophuma yini edunjini
Ukukhuluma nabaphathi besikhungo kwenza ukuthi uzibeke enhlanhleni yokuthola umfundaze ovamise ukukhishwa izikhungo ngokwahlukana kwazo. Angisho kodwa ukuthi akuvamisile futhi akusiyo into eyenzeka kuwo wonke umfundi kodwa yinto ekhona futhi eyenzakalayo. Enye yezindlela zokukhokhela imalimboleko ukufuna izikhungo ezikhokhela abafundi. Ungakafiki ezikhungweni, ungaqala ngokuzama osomabhizinisi bendawo, ubeke udaba lwakho kubo. Ungazama nomasipala kanye nosopolitiki ubuze ngohlelo lukaHulumeni lokusiza labo abangenayo imali.
Izikhungo eziningi eziqasha abafundi uma sebeqedile ukufunda ezifaka phakathi u-Eskom, uTransnet kanye nezinye ezingekho ngaphansi kukaHulumeni zinayo imali eziyibekile ukuze zifundise abafundi bese ziyabaqasha. Okubalulekile ukuthi uzame ngayo yonke indlela ukuthi itholakale imali yokufunda.
Engingcina ngalo elokuthi, kubalulekile ukuthi umfundi azi ukuthi njengoba efunda, ufunda ngemali ebolekiwe futhi okudinga ukuthi ikhokhwe. Lokhu kuzomenza alime indima yakhe uma efika esikoleni. Akuve kubuhlungu ukubona abazali behamba ngezinyawo futhi belambile, bezamela thina njengabafundi kodwa umfundi afike adlale esikoleni.
Kunabafundi abazifundisayo ngemali abayenza ngokusebenza ezitolo ezidayisa ukudla, okufakazela ukuthi umfundi angaklama enkulu indima kodwa mina bengicela ukuthi afunde ngokuzimisela. Eyokufunda ube usebenza ngiyayazi futhi ngiyenzile, ilukhuni kodwa iyenzeka.
Into engingafisi ukuthi saziwe ngayo singaboHlanga ukuthi sihlale sikhangeza ngaso sonke isikhathi.
nguSanele Gamede Apr 9, 2021